China 2.5g Gelatin Ishidi ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Isibonelo, indlela ekhonjiwe yekhekhe le-durian mousse yile: sika izingcezu ze-gelatin zibe izingcezu ezincane bese uzifaka emanzini abandayo (inani lamanzi lingaphansi kwezingcezu ze-gelatin); Sika ikhekhe le-chiffon libe yizicucu ezimbili, cishe i-1.5cm lilinye Sika ikhekhe elisikiwe bese usebenzisa isikele ukusika emaphethelweni. Susa imiphetho ebisikiwe ukwenza i-mousse ibukeke kangcono, ukhiphe amaphilisi we-gelatin athambile bese ufaka amagremu obisi angama-30 bese ushisa imbiza encane yamanzi epanini elincane. Hlanganisa amashidi e-gelatine ngokushisa. Phaka, faka i-durian ibe yi-blender uyihlanze bese ushaya ukhilimu okhanyayo kushukela we-caster nge-whisk kagesi kuze kube yi-6.Hit ukuze ivele imigqa, igudle ohlangothini lokugeleza okuhamba kancane; Govuza ubisi lwenkomo olubandayo nge isipuni ukuvimbela i-gelatine ekucwila phansi.Ngemva kokuxuba kahle, engeza kancane ukhilimu ophehliwe, kungcono ukwengeza kabili, bese ufaka ngokuzayo ngemuva kokuxuba kahle ngakunye; Faka i-durian puree ekukhanyeni ukhilimu uvuselele kahle.Beka ucezu lwekhekhe maphakathi netini lekhekhe.Thela uhhafu wokugcwalisa i-mousse, unyakazise amahlandla ambalwa, ukugcwaliswa kwe-mousse kuzogeleza kahle kuzo zonke izinhlangothi; Faka ucezu lwesibili lwekhekhe bese uthele imousse esele ukugcwalisa. Nikeza ikhekhe ukushukuma okumbalwa futhi ukwenza indawo ibe bushelelezi futhi ipholile.Xuba i-matcha nobisi, uyibeke emanzini ashisayo bese uyayishisa. Yiphuthize ngesipuni, uyikhiphe emanzini ashisayo uyiyeke ipholile.Sebenzisa isipuni esincane ukha uketshezi oluthile lwe-matcha bese uliconsela ebusweni bekhekhe ngokungajwayelekile. Sebenzisa i-toothpick ukuyidonsa ngobumnene ukusuka phakathi kwekhekhe, noma uyisebenzise ngokukhululeka. Yibeke esiqandisini ngaphezu kwamahora amane ngaphambi kokuphaka.
Langaphambilini Ama-peptides ama-Fish Collagen
Olandelayo: 2g Ishidi le-Gelatin